7 Biyo La'aanta Ugu Quruxda Badan Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Biyo La'aanta Ugu Quruxda Badan Yurub
Ku safridda Yurub waxay dib ugu sii noqonaysaa dalxiisyo boqortooyo, kaymaha, iyo dabeecadda ugu quruxda badan iyo biyo-mareennada. Haddii aad u safreyso Talyaaniga ama Switzerland, qorshaynta a 2 Safarka euro, ama u hayaa usbuuc kaliya hal wadan oo Yurub ah, waa inaad waqti siisaa si aad wax u baarto 1 of balliyada quruxda badan ee Yurub, ku qoran our 7 Biyo-mareennada ugu quruxda badan Yurub.
1. Biyo-xidheenka Ugu Quruxda Badan Yurub: Marmore Waterfalls, Italy
Biyo-mareenka Marmore ayaa gaadha 165 m leh kan ugu dheer ka baxsan 3 dhererka d 85 m. Sidaa darteed, daadinta ugu dheer ee dadku sameeyay Yurub waa biyo xireenka Marmore. Biyo-dhaca biyo-xireenka leh waxay ku taal bartamaha gobolka Umbria waxaana abuuray Roomaaniyiintii hore.
Dhagaxyada midabbada cad leh iyo biyo-mareenno kala duwan ayaa si fudud tareen looga raaco Rome Termini ilaa magaalada Terni. Tareenada ku socdaala Terni waa kuwo aad u soo noqnoqda oo tareen ayaa baxa saacad walba. Markaad timaaddo xarunta tareenka Terni, waxaa jira basas kuu qaadi kara biyo-mareenka. Waxaa jira lacag laga soo galo biya-dhacyada.
Si kastaba ha ahaatee, tikidhka tareenka ee Trenitalia waxaad ku helaysaa qiimo dhimis taasina waa faa iido kale oo aad ugu safrayso tareenka ilaa biyo mareenka Marmore:)
Waxoogaa yar oo talo bixin ah insider annaga xaggaaga ah adiga, waxaa jira makhaayadaha waa weyn dhanka hoose ee biyaha wabiga Marmore, laakiin waxaan si xoogan kuugula talineynaa in aad garaacid panini-aad ee lagu tago Da Panzerotto. Lahaanshaha a ubax meel deggan oo xasilloon biyo mareenada ayaa aad uga fiican khibradaha dalxiiska.
Tigidhada Rome illaa Terni
2. Biyo-mareennada Geothermal, Italy
Biyaha ugu caansan uguna sawiran ee Italy waa biyo-mareen-biyoodka tuulada Di Saturnia. Waxay ku yaalliin Tuscany, Meelaha kulul ee Saturnia waa kuwa ugu quruxda badan ilaha kulul ee dabiiciga ah ee Yurub. Magaaladan yar waxay hoy u tahay ilaha kulul ee caanka ah ilaa xilliyadii Roomaanka. Fasaxaaga Tuscany ma noqon doono mid dhammaystiran iyadoo aan maalin la joogin goobaha biyaha kulul ee Saturnia. Ili-biyoodyadu waxay u fiican yihiin is-dejin ka dib markii ay booqdaan meelaha kale ee biyo-biyoodka quruxda badan ee u dhow, Mill, iyo daadadkii Gorello.
The durdurrada Saturnia ee layaabka leh waa a tareen kortaan ka fog Rome. First, waxaad qaadataa tareenka to Orbetello-Monte Arg. oo halkaas waxaad ka heli kartaa biyo-qabadyada quruxda badan ee baabuur ama tagsi, dhammaan wax ka yar 3 saacadood ka Rome.
Rome ilaa tikidhada Orbetello Monte Argentario
Sestri Levante in Tareenadu Rome
Parma in ay Tareenadu Florence
3. Biyo-xidheenka Ugu Quruxda Badan Yurub: Biyo-biyoodka Rhine, Switzerland
Ka fikirida Worth Castle iyo Schloss Laufen, F waterf water water R R R R R R R R one one one one one one are are are are are arefffffffffffff. Jaleecada hore, Biyo-biyoodka Rhine waxay umuuqdaan kuwo aad u gaagaaban, laakiin aad bay u ballaadhan yihiin. Waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho biyo-qabadyadan quruxda badan sharaftooda oo dhan a doomaha wabiga.
Waxaa ugu wanaagsan in la booqdo werooyinka Rhine xagaaga kadib markay barafku dhalaalaan wax walbana hareeraha cagaaran yihiin. Biyo-mareennada Rhine waa a 50 Daqiiqado tareen looga raaco magaalada Zurich runtiina waxaa jira laba saldhig oo tareen oo labada dhinac ee biya-mareennada ah. Sidaa darteed, Way fududahay in loo safro biyo-mareennada cajiibka ah ee qoysaska iyo safra Solo.
Tikidhada Tikidhada ee Zurich Train
Basel ilaa tikidhada tareenka Zurich
Tigidhada Tareenka Vienna ilaa Zurich Train
4. Xariga Staubbach, Switzerland
Muuqaal tuulo cufan oo qurux badan, Biyo-xidheenka Staubbach ee dooxada Lauterbrunnen ee Switzerland waa mid weyn. Muuqaalka ku xeeran biyahan dhaadheer waxay u egyihiin rinjiyeyn jacayl ah. Runtii way jiraan 72 biyo-qabadyada dooxada Lauterbrunnen, laakiin shaki la'aan, Biyo-mareenka staubbach waa muuqaalka ugu quruxda badan uguna jacaylka badan dhammaantood. Xilliga gu'ga, dooxadu waxay ku timaadaa nolol midabo qurux badan leh iyo heerkulka raaxada leh ayaa u oggolaanaya socodka iyo baarista aagga.
Qaar baa dhahaya dooxadan Switzerland ayaa dhiirrigelisay sheekada sheekada 'J.R.R Tolkein' ee Rivendell, oo laga yaabo inuu sii degay tuulada yar oo jeclaa aragtida biyo-biyoodka kafeega cagihiisa.
F Staub Sta water waterububububububububububububububub are are are are are are are are are are Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and 3 saacadood tareenka safarka uga socda Lucerne ama in ka yar 4 saacado laga bilaabo Geneva. Laga soo bilaabo xarunta tareenka, f water water water water are are are are are are are are are are are are are are are are are you you you you you you you you you you you you you you you you you you you you you you you you you.
Lucerne ilaa tigidhada Lauterbrunnen
Geneve ilaa tigidhada Lauterbrunnen
Lucerne ilaa tigidhada Interlaken
Zurich tigidhada Interlaken
5. Biyo-xidheenka Ugu Quruxda Badan Yurub: Stuibenfall, Tirol, Austria
Haddii aad jeceshahay xad-dhaaf oo aad u raadiso gaar ahaan aragtiyo qurux badan, runti waad jeclaan doontaa qulqulka Stuibenfall ee Tyrol. Buundooyinka xannibaadda iyo munaaradaha wareegaya waxay u ruqaansadaan biyo-mareenkan cajiibka ah mid xiiso iyo xamaasad leh. Biyo-la’aanta ugu dheer uguna weyn ee loo yaqaan 'Tyrol' waa 2.4km, si aad ugu sahmi karto maalinta safarka maalin dhaweyd. The raad tug wuxuu ka bilaabmaa oo ku dhammaadaa goobta gawaarida la dhigto ee magaalada Umhausen.
Waxaa waajib kugu ah inaad la kulanto dad badan oo lugeynaya iyo dalxiisayaal jidka mara, markaa haka walwelin inaad dareento cidlo ama lumis.
Munich ayaa kaliya 3 saacado ka fog tareenka Stuibenfall. Sidaas, Tani waxay ka dhigan tahay inaad si fudud uga baxsan karto usbuuca dhammaadka magaalada mashquulka ah oo aado mid ka mid ah biyo-qabadyada ugu quruxda badan Yurub. Sidaas, waxaad ku raaxeysan doontaa baadiyaha iyo Munich labadaba xilliga fasaxa gu'ga ee Yurub.
6. Qulqulaya Krimml, Austria
Waxay ku taal Austria jardiinada qaran ee ugu weyn, Beerta Qaranka ee Tauern High, Biyaha Krimm waa biyo-dhaamin saddex-heer ah, gaarey 1490 m ee dhererka iyo 380 sarreyn m. Kaymaha qadiimiga ah, fauna, deerada cas, gorgorrada dahabiga ahna waa wax yar oo ka mid ah dadka deggan baarkinka oo laga yaabo inay kaa gudbaan waddooyin adiga oo u sii maraya biyo-dhaca kale ee cajiibka ah ee Yurub. Haddii aad tahay xamaasad kaamayn iyo socod barad khibrad leh, Xadiiqadan iyo biyo-mareennada Krimml waxay noqon doonaan wax aan la ilaawi karin oo ku yaal buuraleyda Austria.
Muuqaalka ku yaal agagaarka durdurrada biyaha ayaa si gaar ah cajiib u ah guga ka dib markii barafku dhalaalayo markii biyo-biyoodka Krimml ay daadinayso, shimbiraha heesaha iyo riyooyinka quruxda badan ee toosay jiilaalka dheer kadib.
Waad wadi kartaa ama tareenka a & baska Krimml waterfalls. Safarku wuu kayaryahay 3 saacado laga bilaabo Salzburg isla markaana waqti uma noqon doontid inaad ku dhex socon doontaan jannada Austria.
7. Biyo-Xireennada Gavarnie, France
Waxay ku yaalliin dooxada cagaaran ee cagaaran, biyo-dhacyada Gavarnie ee ugu sarreeya Faransiiska waa 422 mitir sare iyo aad u caan ah dalxiisayaasha. Iyada oo la eegayo "Hautes Pyrenees", Biyo-xidheenka Gavarnie waa mid jacayl ah oo kaamil ah oo ku socdaalayaasha halista ah ee doonaya inay sahamiyaan oo ay guuleystaan Pyrenees Faransiiska. Biyo-la’aanta Gavarnie ayaa ah oo keliya 40 daqiiqado u socda magaalada Gavarnie.
Biyo-mareennada quruxda badan waxay ku yaalliin xadka u dhexeeya Faransiiska iyo Spain oo ku yaal Pyrenees cajiib ah oo keliya 4 saacado ka fog Toulouse tareenka.
Yurub waa meel lagu riyoodo loogu talagalay dadka safarka ah iyo qoysaska. Aad bay u fududahay inaad ku safarto Yurub oo dhan iyo dhammaan durdurrada biyo-mareennada ah ee liiskeenna ku aaddan ayaa laga heli karaa tareen ama bas, waayo, safar-maalmeed ama kaamam, loogu talagalay dadka safarka ah ee khibradda leh ama bilowga ah ee dareemaya dhiirrigelin iyo riyood sahaminta sida ugu wanaagsan ee dabiicadda Yurub.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino helitaanka tigidhada tareenka ugu raqiisan iyo jidadka safarka mid kasta oo ka mid ah biyo-mareennada quruxda badan ee liiskeenna ku yaal.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “7 Biyo La'aanta Ugu Quruxda Badan Yurub” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-waterfalls-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
europetravel tareen safarka traintravelfrance travelgermany Travelingtips travelswitzerland Biyo-dhacyo Biyo-dhacyo ka dhaca Yurub